राजा महेन्द्रको बाटोमा एमाले
भाद्र १८, २०७४
नेपाली कांग्रेस र नेपालका कम्युनिष्टहरुको मेलको सूत्रधार थिए मनमोहन अधिकारी । उनको पार्टी सानो थियो । पार्टीको तुलनामा उनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अविजित थियो ।
अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको डिजाइनमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट एकता सम्भव भयो । संयुक्त वाममोर्चा यही डिजाइनको उपलव्धि थियो । २०४५–४६ को त्यो आन्दोलन ५६ दिन चल्यो ।
राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्थाको विघटन गरे । कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा कांग्रेस वामको संयुक्त अन्तरीम सरकार वन्यो । सरकार संचालनमा आइ परेका समस्याहरुको समाधानमा अधिकारीले सँधै सहयोग गरेका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का बरिष्ठ नेता प्रदीप नेपालले शनिवार आफनो फेसबुक स्टेटसमा लेखेका छन, ‘हामी भारतको विरुध्द कुनै काम गर्दैनौ – एउटा तमसुक । म मरे पनि मेरो देश वाँची रहोस – एउटा कामना । कुन अग्रगामी ? कुन प्रतिगामी ?’
यो स्टाटसको अर्थ वुझिदैन । तर, यसमा आएका प्रतिक्रियाहरुले रहस्य खुल्दै जान्छ । प्रदीप नेपालले कांग्रेस–माओवादी गठवन्धनलाई लोकतन्त्रको खलनायक वनाएका छन । राजा महेन्द्रप्रतिको श्रध्दा र विश्वासलाई आफनो फेसबुक वालमा नउप्किने गरी टाँसेका छन ।
केही वर्षअघि प्रदीप नेपाल गम्भीर रुपले अस्वस्थ्य भए । त्यसवेला देखि नै उनी पार्टीको दैनिक गतिविधिमा त्यति सक्रिय देखिदैनन । यसको मतलव एमालेको महत्वपूर्ण निर्णयमा उनको भूमिका हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । पार्टीभित्र उनको पकड मानिसले सोचेजति कमजोर छैन ।
अहिले पनि, प्रदीप नेपाल पार्टीको रणनीतिक भूमिकामा छन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका उनी स्वाभाविक सल्लाहकारहुन । नेपाल मदन भण्डारी वाहेक अरु कसैलाई नेता मान्दैनन । उनले कसैलाई मान्नुपर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन ।
उनी विभिन्न पार्टीहरुका वीच चलखेलका विज्ञ हुन । जन–आन्दोलनपछिका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि काठमाडौंबाट उम्मेदवार हुनुभएका कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एमालेकी विद्या भण्डारीले चुनावमा पराजित गरेकी थिइन । त्यतिवेला, प्रदीप नेपाल नै त्यो चुनावी कर्मकाण्डको मुख्य पुरोहित थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जसरी भएपनि भट्टराईलाई हराउनु थियो ।
त्यसैले एमालेका प्रभावशाली नेतासंग उनको भलाकुसारी स्वभाविक थियो । त्यसका लागि फिट थिए प्रदीप । उनैले प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भट्टराईको उम्मेदवारी विरुध्द युवा संघ नेपालको परेड खेलाएर शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए ।
नेपालका कम्युनिष्टहरु राजतन्त्रका विरोधी होइनन । राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातन्त्रका विरुध्द सैनिक कारवाहीगर्दा तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझी राजाको समर्थनमा उभिएका थिए । उनको त्यो समर्थनका विरुध्द पुष्पलाल श्रेष्ठको विरोध कर्कलाको पातको पानीको अवस्थामा थियो । देशबाट वाहिरिएका पुष्पलालको केही लागेन ।
रायमाझीको नेतृत्वमा त्यो बेलाका कम्युनिष्टहरुले देशमा अनेक थरी पूmल पूmलाएर राजाको शासन अकण्टकराख्न मेहनत गरे । यसका विरुध्द अभियान चलाउन नखोजिएको थिएन । कम्युनिष्टहरु आफैंपनि विभिन्न दस्तावेज र समूहहरुको वखेडामा अल्झिए ।
अभियान चलाउने परिस्थिति पनि विद्यमान थिएन ।
नेपाली कांग्रेस र नेपालका कम्युनिष्टहरुको मेलको सूत्रधार थिए मनमोहन अधिकारी । उनको पार्टी सानो थियो । पार्टीको तुलनामा उनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अविजित थियो । अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको डिजाइनमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट एकता सम्भव भयो । संयुक्त वाममोर्चा यही डिजाइनको उपलव्धि थियो । २०४५–४६ को त्यो आन्दोलन ५६ दिन चल्यो ।
राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्थाको विघटन गरे । कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा कांग्रेस वामको संयुक्त अन्तरीम सरकार वन्यो ।
सरकार संचालनमा आइ परेका समस्याहरुको समाधानमा अधिकारीले सँधै सहयोग गरेका थिए । भट्टराई नेतृत्वको यो संयुक्त सरकार सफल भयो । देशका लागि नयाँ संविधान वन्यो । तर, त्यो नयाँ संविधान अपूर्ण रहेको हेक्का कसैले राखेन । २०४७ सालमा वनेको संविधान २०५७ सम्मपनि टिकेन ।
२०६२–६३ को आन्दोलनले देशमा अलग परिस्थितिको निर्माण गर्यो । मूलधारका राष्ट्रिय दलहरु र माओवादीका वीच दिल्ली सम्झौतापछि भएको जन–आन्दोलन सफल भयो । आन्दोलन मार्फत जनादेश पाएका राजनीतिक दलहरुले संविधान सभाको चुनाव गराए ।
चुनाव परिणामले राजतन्त्रलाई अनावश्यक ठहर्यायो । नेपालको राजतन्त्र इतिहास वन्यो ।तर, संविधान सभाले संविधान लेख्न सकेन । अल्पमतमा परेका कांग्रेस र एमालेको भूमिका पनि निकै संकुचित वनेको थियो । यही परिवेशमा माओवादीको हातमा रहेको नेतृत्व कसैले कल्पना नै नगरेको ठाउँमा पुग्यो । तै, जसरी भएपनि चुनाव गराउने एजेण्डा कार्यान्वयन भयो । संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनले कांग्रेसलाई पहिलो, एमालेलाई दोस्रो र माओवादीलाई तेस्रो तहमा ल्यायो ।
दोस्रो संविधान सभाले संविधान वनाउने निश्चित भएपछि समाजलाई एक अलग प्रकारको व्दन्व्दमा धकेल्ने प्रयासहुनु अस्वाभाविक थिएन । यही क्रममा हिन्दू राज्य र हिन्दू राजाका कुरा निकै उछालियो ।हिन्दू एजेण्डामा कांग्रेस एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरुको अगुवाइ रह्यो । तर, संविधान आन्दोलनको स्पीरिटमा वन्यो । यसको कार्यान्वयनमा दलहरुले आफनै स्वार्थका कारण जटिलता ल्याए । यतिवेला जव देश प्रादेशिक र संघीय संरचनाको चुनावमा लागेको छ एमालेले फेरी एकपटक राजतन्त्रको दुहाइ दिन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमालेका नेतागण महेन्द्रको देशभक्तिबाट अभिभूत भएका छन ।
उनीहरुले महेन्द्रको देशभक्तिका वूँदालाइ चुनावी नारा वनाएका छन । उनीहरुको धारणा यस्तो देखिन्छ कि चुनावमा वहुमत आउने हो भने उनीहरुले देशलाई महेन्द्रकै बाटोमा हिंडाउनेछन ।
एमाले नेतृत्वको अहिलेको पूरै मनस्थिति राजनीतिक एकाधिकारको पक्षमा देखिएकोछ । आफनो प्रतिस्पध्र्दीलाई अस्वस्थ्य प्रतिस्पध्र्दामा अल्झाउने नीति लिएकोछ एमालेले । कस्तो नीति लिने ? यो एमालेको कुरा हो । तर, विपक्षीका रुपमा रहेका कांग्रेस–माओवादीले पनि यो कुरा ठम्याउन सकेका छैनन ।
दुइ नम्वर प्रदेशमा एमालेको चुनावी उपस्थितिमा पनि यो कुरा स्पष्टसंग देखिनेछ । दुइ नम्वर प्रदेशमा एमालेका विरुध्द देखिएको विरोध राजनीतिक भन्दा पनि आक्रोशको प्रदर्शनका रुपमा देखिएकोछ । नेपाली कांग्रेस, राजपा र माओवादीका कार्यकर्ता प्रदेशमा सक्रिय छन । स्थानीय पर्यवेक्षकहरुको रायमा उनीहरुकोसक्रियता मात्रैले एमालेलाई रोक्न सक्दैन । एमाले अहिले राजावादी विचारमा राष्ट्रवादी मुलम्वा चढाएर राष्ट्रवादका नाममा जनताको समर्थन आफूतिर तान्न खोज्दैछ ।
एमालेका रणनीतिकारहरुले राष्ट्रवादको नाराले धेरै मानिसलाई आकर्षितगर्ने अनुमान गरेपनि परिवर्तित समयमा त्यस्तो अवस्था उपस्थित हुन कठिन देखिन्छ । दलहरुको वीचमा मतको सन्तुलन मिल्नु कठिन देखिन्छ । यस्तोमा धाँधलीका आर्थिक हतकण्डाले कामगर्न सक्दछन ।
मधेशलाई तीखो आँखाले हेरी रहेका विश्लेषकहरु पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरी भागमा एमालेको वर्चस्व रहेको वताउँछन । उनीहरुको यो विश्लेषण पूरै गलत होइन । तर, परिवर्तित समयमा यहाँका जनताको राजनीतिक विश्वासमा पनि परिवर्तन आएको देखिएको छ । यो क्षेत्रका कतिपय मतदाता कांग्रेस–एमालेपार्टीको तुलनामा राजपालाई मत दिने मनस्थितिमा रहेका छन ।
प्रदीप नेपालको फेसबुक स्टाटसको लक्ष्य दुइ नम्वरको स्थानीय तहको चुनावलाई प्रभावितगर्ने हिसावले मात्रै आएको होइन । दुइ नम्वरमा त त्यसको अलिकति प्रयोग र परीक्षणमात्रै गरिएको हो । एमालेले देशमा डँढेलो झै फैलिएको भ्रष्टाचार र अराजकता रोक्न प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा महेन्द्र राष्ट्रवाद, चीनियाँ सहयोग र अत्याधुनिक विकासलाई चुनावी नारा वनाउने प्रचूर सम्भावना छ । यसलाई कांग्रेस, राजपा र माओवादीले कति वुझेका छन ? भन्न सकिदैन ।